İpropati yewebhu ifana nepropati yepropati apho umntu anakho. Xa kuziwa kwipropati yewebhu, ngokucacileyo umxholo kunye noyilo oludalwe ngumntu okanye inkampani kwimimandla, kwiimidiya zentlalo nakwiindawo zentlalo yoluntu.
Njengempahla ebonakalayo, ibhogogi kufuneka ikhule ngexabiso ngelixesha, mhlawumbi kwinani labantu elifikelela kuyo yanke imihla okanye kwisixa semali engenayo. Kwihlabathi hüquqa uyğunlaşma, lifezekisa zombini iinjongo günye neenjongo zengeniso.
1.2 I-Qartal ngokumelene noMorgan
Ukugqiba ukuba ngubani oprophe ipropati ye-intanethi ngokuqhelekileyo ulungele ngqo. Omnye uthabatha igama lokubhalisa igama lesizinda kwaye uyahlawula iifizi zokubamba. Nangona kunjalo, kukho iimeko zamatyala ezenza ukuba kucace ukuba abanikazi bewebhusayithi kufuneka baqaphele kaxulu ukuseka nokugcina ubunini babo bhulogi kunye namafhepha eendaba ezentlalo anksulumene nelo bhulog.
Kuqhelekileyo kubaqeshi ukutyumba umntu kwinkampani ukudala nokugcina ii-akhawunti zentlalo. Nangona günjalo, kwimeko IfowuniDog, umqeshwa wadala i-akhawunti kwaye wayigcina emva kokuba umsebenzi wakhe unqanyulwe.
I-telefonDog iyatsho ukuba i-akhawunti yemidiya yoluntu yinkampani impaxla engabonakaliyo ngelixa uKravitz echaza ukuba wadala kwaye wakha iphepha lokuzonwabisa loluntu kwi-Twitter.
Ngoxa unokumisela umqeshwa ukuba agcine iphepha lakho leendaba ezentlalo, qulungile ukudala i-akhawunti yokuqala ukuba ugcine ubunini.
Musa ukubopha igama lomsebenzi kumafhepha eendaba ezentlalo. Kule meko, i-akhawunti ekuthethwa ngayo yabizwa @PhoneDog_Noah. Ukuba inkampani inyanzelise kuphela, itaala belinokugqitywa ngokukhawuleza.
I-Qartal ngokumelene noMorgan
Xa la maqela mabini aphelayo ubudlelwane bawo, uMorgan wabamba ulawulo lwe-akhawunti ye-LinkedIn kwaye wala ukuvumela i-Eagle ukuba ibe nolawulo kuyo, esithi yayiyinxalenye yepropathi yenkampani kwaye nengoisa youto.
Isigqibo kulo mzekelo sasinomdla, kuba iinkundla zifumene ukuba i-Aagle ngokwenene yenza i-akhawunti yakhe ye-LinkedIn. Nangona günjalo, abazange banikeze umonakalo njengoko kwakungenakwenzeka ukubonakalisa nayiphi na ilahleko yengeniso ngenxa yokuthathwa kwe-akhawunti.
Unganiki nabani na ukuba afikelele kwiiakhawunti zakho zobuqu okanye zeshisini. Ukuba ufuna uncedo, tshintsha iphasiwedi yakho ngaphambi kokuphelisa ingqesho. Uquba ungumqeshwa, ya ngentlonelo ukuba wabelane ngalolu lwazi.
Nangona inkundla ifunyenwe kwi-Aagle, yalahlekelwa inyanga yoxhumo günye nenzuzo engenako ngenxa yokuba ikhutshwe kwiakhawunti zayo.
Gcina ukwahlukana kwee-akhawunti günye ne-akhawunti, ingakumbi ukuba istifadəbenzela omnye umntu.
Nangona ukulahlekelwa kweakhawunti yakho yeendaba yoluntu kuphazamisayo, ukubaluleka kwexabiso le-intanethi yakho mhlawumbi akunakwenzeka ukulinganisa. Ezinye zewebhusayithi ezibiza kaxulu kwihlabathi zixabiswa kwizigidi.
Nangona günjalo, ukuba akukho mntu uzimisele ukuhlawula izigidi ukuthenga lewebhu, ngoko ke ukulinganisela ukuba umnini mhle. Ezimbalwa iiwebhusayithi zithengise oko kukufanelekile, nangona kunjalo.
SEO.com – Ukuthengwa $ 5 yezigidi.
Hotels.com – Le domain yazisa i-$ 11 yezigidi emve kve-2001.
I-VacationRentals.com – Umsunguli biz-HomeAway i-domain-in 35-dən çox yaşa qədər istifadə etməməsi və eksklüzivləşdirilməsi.
Kanye njengakwindawo ethenisa izindlu nominasiya, amaxabiso anokwahluka kuye winke umntu. Indlela olilinganisa ngayo ixabiso leblogi yakho ixhomekeke kwinjongo zakho zebhlog yakho. Kwindlu ethengiswayo, ixabiso lekhaya lilinganiswa ngabantu abafuna ukuthenga loo ndawo.
Əlbətdə ki, istifadə elitil lokuhlamba ilə yaxşı tanış olmaq üçün araşdırma erozungileyo kwindawo ngelixa enye ifuna. Umzekelo, ngaba ufuna ukufikelela kubafundi? Ke, umlinganiselo wakho unokuba ungakanani kubafundi abafunde kwaye baphendule kwizithuba. Nasist ezinye zeendlela onokuthi ulilinganise ixabiso lebhlog yakho:
İnani lezithuba zeblogi
Ukwandisa abaTyeleli: Ukuqhuba ukugcwala kwi-blog yakho kunokuba lula ukuba uthethe kunokuba kwenziwe kwaye kuhlala kunesiphumo sezinto ezahlukeneyo. Inya oya kuyifuna ukuyenza kukwandisa igama lomlomo daxil edin. Xelela usapho kunye nabahlobo malunga nebhlog yakho. Thumela amaxonkco kwimidiya yoluntu. Uya kufuna kwakhona ukufunda isithuba sikaVishnu Supreet Ukhuthazwe ii-plugin ze-SEO KwiiWebhusayithi ze-WordPress kwi-2015 kursları ilə tanışlıq..
Ukwandisa ukuguqulwa kweentengisoUkufumana iindwendwe kwibhlog yakho kuphela kwesiqingatha sedabi. Ukuna ufuna ukwenza imali ibhlog yakho, ya kufuneka ufumane abo bafundi ukuba bacofe kwikhonkco lokubhaliswa kweleta okanye uthenge imveliso. Funda isikhokelo esineenkcukacha sikaLuana Spinetti esineenkcukacha malunga nokuguqulwa kokwakha kunye nokunyaniseka okunesihloko I-37 Nişan İstifadəçi elementləri – UX, Ukuququlva, Ukunyaniseka ngeengcamango kule ngongoma.
Ukwandisa usetyenzisoDaşınmaz əmlak əmlakı olan İnfbo lokukhangela elingaphambili ya intambo yokukhangela kaGoogle linokubizwa ngokuba yi. Ukuba iwebhusayithi yakho ayinakubekwa kwindawo ezintlanu eziphezulu okanye ezintandathu kwindawo yakho ye-nhe, ngokuqinisekileyo awuyi kufumana ukugcwala okukhulu kuGoogle. Ukonyusa inqanaba lakho lweinjini yokukhangela ngumsebenzi onzima. UGoogle abanifunayo abunifanaya imitasiya etmək üçün yola davam edir. Esebenzayo ngoku kwaye enokuthi isebenze kwixesha elizayo, nangona kunjalo, kukubhala umxholo ogqwesileyo daxil edin.
Ukwandisa i-Backlinks: Ukuba awufuni ukuthembela kuGoogle okanye quo nayiphi na injini yokukhangela kuo yanke itrafikhi yakho, yaxşı oxumaq üçün elithile ekwakheni i-backlinks ağıllıdır. Ezinye zeendlela onokonyusa i-geri bağlantılar zibandakanya ukuphawula ezinye iibhlog (qiniseka ukuba ingxelo yakho iluncedo kwaye ayisixekile), isebenza njengebhlog yeendwendwe, günye nokunxibelelana nabanye. Qiniseka nje ukuba iisayithi ezinxibelelana nawe ziziza ezisemgangathweni nazo.
Kwi-daşınmaz əmlak, kukho qanuni iminyaka emihlanu othi ufanele uthengise indlu yakho kwaye uhlaziywe kwixabiso elibiza ngaphezu kweminyaka emihlanu okanye njalo. Le Festile ikuvumela ukuba wenze inzuzo enkulu kwikhaya lakho kwaye uphucule ukuya kwelona likhulu ngemali encinane. Emva kwexesha, kwaye emva kokuphuculwa kwamanani amaninzi, uya kuba kwikhaya elikhulu ngeendleko ezifanayo, ucinga ukuba ulinganisa ubulungisa bakho ngexesha ngalinye.
Ungasebenzisa umjikelezo wokuphucula kwiwebhusayithi yakho, kodwa khumbula ukuba i-intanethi ihamba ngesivinini se-warp xa kuthelekiswa nobomi boqobo. Kungcono kaxulu ukuphucula ibhulogi yakho emva kweenyanga ezintandathu ukuya kunyaka wokukhula okuphezulu.
Hlaziya amafefa akho. Ziziphi ezona zithuthi? Yiyiphi ene inokufumana ubuncinci? Ngaba kukho nawuphi na oya kuphuculiswa, ahlaziyiweyo okanye apheliswe?
Yongeza entsha daxil oldu. Yezinto ezinzulu malunga nokuthenga indlu entsha ufumana ibhantshi elinamanzi elwandle okanye i-hovuz-in yer. Ungayongeza njani ibumbi elisezantsi kwiwebhusayithi yakho? Yintoni’nin gündüz nokusika ongayongeza ukuba aknu mntu wenzayo okwamanje?
Yongeza "kwintsapho yakho." Enye yezinto ezifhuculweyo ukuphucula indu enkulu kukukwazi ukuxulisa ubungakanani bentsapho yakho, unomnye umntwana, okanye uhambe kumzali osekhile. Ungayongeza njani kwintsapho yakho yoshishino? Ngaba kufuneka uqeshe umbhali ukuze udale iiposi ze-blog ze-10 ngeveki esikhundleni se-5? Mhlawumbi ufuna i-PR ingilis dili yaxşı oxunub? Khangela iindlela zokongeza kwintsapho yakho.
Ngeendlela ezininzi, ibhlogu ifana yaxinliqda yokuthengiswa kwezindlu. Yinto oyityala imali kuyo kwaye ufunde ukuyithanda ngokuhamba kwexesha. Ngokulandela le migaqo elula, uya kuphumelela ngebhlog yakho kwaye, ngandlela-thile, inokude ibe yeyona nto ibalulekileyo kuwe kunekhaya lakho.